Adiresy: Salita alla Rocca, Città di San Marino, San Marino
Daty nanorina: ny taonjato faha-11
San Marino dia manondro ireo toerana tadiavin'ny mpizaha tany mitsidika, tonga eto amin'ity fanjakana bitika ity manerana izao tontolo izao. Ny tena mampiavaka azy dia manodidina ny faritra rehetra amin'ny faritanin'i Italia. Ny toerana avo indrindra eto amin'ity firenena ity dia eo amin'ny Tendrombohitra Monte Titano , izay manakatra ambony ny ranomasina amin'ny 750 metatra. Ilay tendrombohitra dia misy tampony telo, izay samy nanorina tilikambo fiarovana telo avy ny tsirairay tamin'ny taonjato fahatelo . Ny anarany dia Montale , Tratra ary Guaita.
Inona no mahaliana momba ilay tilikambo?
Ny tilikamban'i Guaita San Marino dia manana anarana hafa - Prima Torre. Ary ity no rafitra fiarovana matanjaka indrindra amin'ny fanjakana. Niorina tamin'ny taonjato faha-11 izy io ary nampiasaina tany am-ponja, ary toy ny tilikambo. Ary ity toerana ity dia fialofana izay ahafahan'ireo mponina miafina amin'ny fahavalo.
Ny maha-zava-dehibe ny tilikambo dia milaza ny anarany, satria ny Prima Torre amin'ny dikanteny dia midika hoe "The First Tower". Ny voalohany sy tena tsy mety. Ny mahazatra ny fiarovana dia ny toerana misy azy: mihantona amin'ny onja iray mahagaga. Saingy tsy izany rehetra izany: ny tilikambo dia voahodidin'ny rindrina, izay napetraka amin'ny peratra roa.
Ary amin'izao fotoana izao ny mandresy any Guaita dia mbola malaza indrindra any San Marino . Na dia teo aza ny fanorenana azy tamin'ny taonjato faha-10. Avy eo, tamin'ny faran'ny taonjato faha-15, niorina ilay tilikambo, ary naharitra roanjato taona ny fanorenana azy. Ny tanjona mivantana, ny fonja, dia mbola voatahiry tamin'ny taonjato faha-20 ka hatramin'ny 1970. Azo antsoina hoe iray amin'ireo fonja tranainy indrindra eto an-tany izany.
Mecca ho an'ny mpizaha tany
Ary na dia amin'izao fotoana izao aza, ny trano mimanda ao Guaita ao San Marino dia tena mampiahiahy. Ary raha mivezivezy ianao, dia mitoetra hatrany ny fahatsapana fa teo amin'ny Moyen Âge. Ary ny fanamafisana io dia ny takelaka vato, izay avy eo ny rivotra mangatsiaka mitsoka, ny varavarankely madinika sy ny labyrinths misy ny gorodona.
Saingy ankehitriny dia fantatra ho toerana malaza ho an'ny mpizaha tany i Guaita. Na dia eo aza ny fiakarana mihazakazaka, mbola miezaka ny mandresy ity lalana ity ny olona, ​​satria ny fomba fijery tsy hay hadinoana dia misokatra ho an'ny manodidina. Miadana kely ianao afaka mandinika an'i San Marino sy Italia. Ao an-tampony ho an'ny mpizaha tany dia namorona sehatra fanaraha-maso tsara, izay mamela anao hankafy ny fomba fijery. Eto koa ny iray amin'ireo tranom-bakoka maro ao amin'ny fanjakana - ny Museum of History of San Marino. Ny toetra iray hafa mahaliana ao amin'ny tilikambon'i Guaita dia ny hoe amin'ny andro fety avy amin'ny bastions ny fiarovan-doha dia navoaka fahiny, nefa mbola mahomby, fitaovam-piadiana.
Ary avy eo dia toa mitafy fiarovan-tena sy mandray fiarovana ireo mponina ao amin'ity firenena madinika ity nefa tena mirehareha. Ary ny fiarovana indray, toy ny an'arivony taona, dia hanampy amin'ny fitazomana ny fahaleovan-tena. Saingy raha milamina kosa ny zava-drehetra, dia ho faly amin'ny fikarakarana ireo pizza mahagaga anao ny mponina ao an-toerana ary mivarotra ny divay tsara indrindra.
Guaita no toerana ahafahanao mandehandeha ela, mandinika ny efitranon'ny fonja sy ny tohatra, ary mankafy ny manodidina, manakaiky ny rahona.
Any San Marino dia tsy misy seranam-piaramanidina manokana, noho izany dia mendrika ny mampiasa ny seranam-piaramanidina akaiky. Ny seranam-piaramanidin'i Rimini dia 25 km miala an'i San Marino. Azonao atao ihany koa ny manidina any Forli, Flonk na Bologna, na dia ela loatra aza dia hijanona any.
Avy any Rimini ka hatrany San Marino, mandeha isan'andro ny fiara fitaterana, ary 45 minitra ny dia. Isan'andro, fiara fitaterana 6 na 8 farafahakeliny farafaharatsiny. Ny toerana azo antoka indrindra amin'ny fambolena dia fiara ao Piazzale Calcigni (Piazzale delle Autocorriere).
Raha mandeha amin'ny fiara ianao, avy any Rimini ka hatrany San Marino dia mila mandeha amin'ny làlambe SS72 ianao. Tsy misy fifehezana sisin-tany eo amin'ny fidirana ao San Marino.
Mosquée de Mustafa Pasha
Ny vokatry ny meningita
Akanjo fohy miaraka aminà kiraro malefaka ao amin'ny balala
Nifandray tamin'i Olivia Hamilton i Damien Shazell
Gazety amin'ny akanjo lamaody
Ny fanomezam-pahasoavana 10 azonao atao amin'ny Internet dia maimaim-poana
Aquamarine - loko tena lehibe tamin'ity lamaody ity
Rolex Daytona mijery
25 akanjo fampakaram-bady, izay ho henatra ho an'ny mpampakatra, fa koa ho an'ny vahiny!
Fihetsiketsehana nandritra ny tsingerintaonan'ny tsingerintaona: Gina Lollobrigida dia namoy ny ainy tamin'ny vadiny vavy!
Hanina sakafo alika
Fashion ho an'ny vehivavy bevohoka - Lohataona 2016
Ny Leokocytes amin'ny harary eo amin'ny vehivavy dia natsangana - ny antony sy ny fomba fanapahan-kevitra momba ny olana iray